Activities Plan » Computer University (Kyaing Tong)
Organization of Computer University (Kyanig Tong)
The Computer subjects_ Software, Hardware, Application, Information Science and Computational Mathematics are taught at the Computer University of Kyaing Tong.
– Holding English essay competitions , Myanmar essay and poem ones as the rememberance of the independence day in order to flourish the sense of union spirit.
– Being held Nyaung- Yae –Thone festival lead by the Buddhist Association.
-Being held the ceremony of planting in rainy season.
The following associations and society are organized in the Computer University of Kyaing Tong.
– Buddhist Association
– Blood Donation Group
-Shan literature and culture association
Sport groups are also organized in the Computer University of Kyaing Tong. The matches of Fusel football and chess will be held for student.
There arealot of tent books, thesis research papers and books for knowledge and pleasure in the library.
Plan for Tuition Eradication.
(က)ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)တွင် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာဘာသာရပ် များမှာ ပရိုဂရမ်နည်းပညာ(Software)ဘာသာရပ်များ ၊ စက်နည်းပညာ(Hardware) ဘာသာ ရပ်များ၊ အသုံးချနည်းပညာ (Application)ဘာသာရပ်များ၊ သုတသိပ္ပံ (Information Science) ဘာသာရပ်များနှင့် တွက်ချက်ရေးသင်္ချာ(Computational Mathematics) ဘာသာရပ် များဖြစ်ပါသည်။
-လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်၊ ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ် အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ရှင်သန် ထက်မြက်ရေးအတွက် စာစီစာကုံးနှင့် ကဗျာပြိုင်ပွဲများ၊ Essay ပြိုင်ပွဲများ အားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပခြင်း။
-ဝါတွင်းကာလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းများ ကပ်လှူပူဇော်ပွဲကျင်းပခြင်း။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအသင်းအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါသည်။
(ဃ) အားကစားဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ ၊ အားကစားအမျိုးအစားနှင့် ပွဲစဉ်များ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)အနေဖြင့် အားကစားအသင်းများဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ထား ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများအား မိုးရာသီအမျိုးသားဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ ၊ စစ်တုရင် ပြိုင်ပွဲများကျင်းပပါသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတ)ရှိ ကျောင်းစာကြည်တိုက်တွင် ပြဌာန်းစာအုပ်များ၊ သုတ၊ ရသဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ သုတေသနနှင့်ဆိုင် စာတမ်းများကိုထားရှိပါသည်။
Copyright © 2016 University of Computer Studies (Kyaing Tong). All Rights Reserved.